I-China SM-Superplasticizer Abenzi Nabahlinzeki | I-Divenland
IHydroxypropyl Methyl Cellulose
IHydroxyethyl Methyl Cellulose
Izinto zokwakha ze-Gypsum kanye ne-putty
Izinhlelo zokubeka amathayili
Zokuvikela uhlelo nosimende
Ishidi elikhiqizwe usimende
Umkhakha Wezingubo Zamanzi
I-Melamine Superplasticizer iyinhlobo yokusebenzisa amanzi i-anionic i-soluble futhi inamandla okumuncwa nokuhlakazeka usimende. I-powder ye-melamine esekwe ebangeni eliphakeme kakhulu ye-superplasticizer yenziwe nge-sulfonate melamine formaldehyde resin nge-centrifugal spray drying enezici zendawo enkulu ethize, ukugeleza okukhulu kakhulu kwama-powder owomile, okungahlaselwa umswakama nokuthwebula nomphumela omuhle wokusakazeka. Inokuhambisana okuhle nezinye izinhlobo zokunciphisa amanzi futhi iguqula ukusebenza okuphelele kwezinye izifinyezo zamanzi ngezimpawu eziphambili zesilinganiso sokunciphisa amanzi, ukungafakwa komoya, akukho ukugqwala emigodini eqinisiwe enokuqukethwe okuphansi kwe-chloridion nokuvumelana nezimo okuhle nakho konke uhlobo lwamakhebuli.
I-Melamine based high level superplasticizer nayo ingasetshenziswa njengengxenye eyinhloko yezinto zokwenziwa kobufakazi bamanzi ukukhulisa ukungangeni kokhonkolo nodaka. Ingasetshenziswa njengengxenye yezingxenye, kanye nezinye izinto ezifana ne-UEA ukuhlanganisa isakhiwo sikakhonkolo wobufakazi bamanzi uqobo.
Izinga Lokunciphisa Amanzi%
Izinga lokuqina lamandla 1 usuku
I-Shrinkage (izinsuku ezingama-28)%
Ukusetha umehluko wesikhathi min. Kuqala
1) 25kgs / Isikhwama (isikhwama sepulasitiki esilukiwe esine-lining PVC)
2) I-powder kulula ukuyidonsela umswakama futhi kufanele igcinwe kwizikhwama zokuqala eziboshwe uphawu futhi ibekwe endaweni eyomile.
3) Umkhiqizo awunobuthi, awucasuli, awunakuvutha. Gwema ukuxhumana iso, umlomo nesikhumba. Kunconywa ukusebenzisa amagilavu ​​kanye nezibuko zokuzivikela. Uma kwenzeka uthintana nesikhumba, hlambulula kahle ngamanzi amaningi ahlanzekile.
Esedlule: I-Super -astic Superplasticizer
Olandelayo: I-Polycarboxylate Superplasticizer
Polycarboxylate Isekelwe Superplasticizer
I-Polycarboxylate Ether Superplasticizer
I-Polycarboxylate Superplasticizer Basf
Intengo yePolycarboxylate Superplasticizer
I-Polycarboxylate Superplasticizer Umama Utshwala
Polycarboxylate superplasticizer powder ezomile ...
I-Silicone Hydrophobic Powder
I-Super -astic Superplasticizer
Ingabe i-hydroxypropyl methylcell ...
Izici nokusetshenziswa kwe-redi ...
Ukusetshenziswa kweRedispersibl ...
7F, Isakhiwo se-3B, i-Aodong Zone, Isifunda saseQuanshan, iXuzhou, China
Sishayele Manje: 0086-18118579776